Khadka tooska ah: +86 769-82036868
Foornada Wareejinta Dijital ah
Foornada Isku -Darka Farsamada
Foornada Isku -xirka Uumiga
Bixiyaha Biyaha Kaliya
Cunto kariyaha badan
Sameeyaha Macmacaanka Barafka Badan
Ku raaxayso dubitaankaaga foorno -wareejin
Foornada isku-xidhka waxay qaadataa weelka dhalada ee Frecnch, kaas oo si toos ah uga soo dejiya Frech, 360-digrii muuqaalka muuqaalka cuntada karinta, ku raaxayso xiisaha dubista! Waxaad had iyo jeer mashquul tahay inaadan waqti u lahayn karinta. Miyaad rabtaa inaad ku raaxaysato xiisaha cunto karinta guriga adiga keligaa? Haha, had iyo jeer waxay ku dhammaataa ev ...
Waxaa La Daahfuray Makiinad Biyaha Badeecad Cusub Ah
Alaabta Cusub — Bixiyaha Soodhaha oo La Bilaabay Sidaan wada ognahay, dal ahaan, sayniska iyo farsamadu waa xoogagga wax -soo -saarka asaasiga ah, sayniska iyo teknolojiyaduna waxay dib u soo nooleeyaan dalka; iyo warshad ahaan, awoodda R&D iyo kartida naqshadeynta waxay si dhow ula xiriirtaa xawaaraha iyo q ...
SHANGHAI AQUATECH CHINA JUNE 2 -JUNE 4 -ta 2021
Aquatech China waa bandhigga ugu weyn ee ganacsiga biyaha caalamiga ah ee Shiinaha ee dhinacyada geeddi -socodka, cabbitaanka iyo biyaha wasakhda ah. Bandhiggu wuxuu u adeegaa sidii goobtii ay ku kulmi lahaayeen dhammaan hoggaamiyeyaasha suuqyada ee ku jira waaxda biyaha ee Aasiya. Aquatech Shiinaha waxay diiradda saareysaa badeecadaha iyo adeegyada ku jira tikniyoolajiyadda biyaha ...
Shaohong Electronic Technology Co., Ltd. Ogeysiiska Fasaxa 1 -da May
Iyada oo laga jawaabayo tilmaamaha iyo siyaasadaha qaranka, iyo sidoo kale xaaladda wax-soo-saarkeeda, Shaohong Electronic Technology Co., Ltd. waxay go'aansatay inay fasax ka qaadato 5 / 1-5 / 5. Inta lagu jiro fasaxyada, adeegga macaamiisha e-ganacsiga gudaha ayaa ka jawaabi doona ku weydiinta macaamiisha khadka tooska ah waqti habboon, int ...
2021 Bandhiggii Shanahong Spring Canton Fair Online wuxuu ku dhammaaday si guul leh
Dhamaadkii 2020, markii dadku isu diyaarinayeen inay u dabaaldegaan Dabaaldegga Gu'ga, coronavirus -ka cusub ayaa si aamusnaan leh ku yimid, faafitaanka degdegga ah ee fayrasku wuxuu sababay argagax guud ahaan dalka. Duruufahaas aadka u daran, waddanku si dhakhso leh ayuu u sameeyay tallaabooyin ka hortag ah, deegaannada kala duwanna waxay ka jawaabeen ba ...
Sida loo doorto qaybiyaha biyaha wanaagsan, shaohong qaybiyaha biyaha ayaa kuu fiican adiga!
1 、 Sidee baa qaybiyaha biyaha u galayaa guri kasta? Bixiyaha biyaha waa wax soo saarka qoyska si loo xaliyo dhibaatada biyaha la cabbo. Sababtoo ah hagaajinta tayada biyaha la cabo ee dadka iyo tayada nolosha, waxaa jecel dadka Shiinaha. Muuqaalka qaybiyaha biyaha ayaa ka dhiga cabitaankeena ...
Steam Foornada oo ay la socoto Weelkii Faransiis “Si se xing ye” (Waa dabeecadda in wax wanaagsan la jeclaado, laga yaabee cunto), jacaylka cuntadu waa baacsiga aan dhammaadka lahayn ee aadanaha bilowgiiba.
Steam Foornada oo ay la socoto Weelkii Faransiis “Si se xing ye” (Waa dabeecadda in wax wanaagsan la jeclaado, laga yaabee cunto), jacaylka cuntadu waa baacsiga aan dhammaadka lahayn ee aadanaha bilowgiiba. Maanta, markii noloshu aad u badato, cuntada dadka, dharka, iyo cuntada dadku aad bay isu beddeleen. Noocyada cuntadu waa ...
Dongguan Shaohong Electronic Technology Co., Ltd. wuxuu ka soo muuqanayaa Bandhigga Biyaha Caalamiga ah ee Amsterdam “AQUATECH”
Laga bilaabo Nofeembar 5 illaa Noofambar 8, 2019, 25 -aad "Bandhigga Daaweynta Biyaha Caalamiga ah ee Amsterdam" ayaa lagu qabtay Xarunta Caalamiga ah ee Bandhigga iyo Bandhigga RAI ee Amsterdam, Netherlands. Ilaha silsiladaha kala duwan ee taxanaha ah, kuwa sifeeya biyaha iyo biyaha dhalaalaya ...
Cinwaanka: NO.347 Wadada Xiangyang, Tuulada Shigu, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong, China
SHANGHAI AQUATECH CHINA JUNE 2 -JUNE ...